mubvunzo B773ER Matambudziko
2 makore mwedzi 1 apfuura #294 by Dariussssss
OK, Ndine Newest B773ER Philippines kubva pano, uye pane dambudziko hydraulics. Mumwe hurongwa, sokuti chinhu, uye zvisinei zvandinoita, inogara saizvozvo. Nokuda kwaizvozvo, Ndinongova zvokutamburira kukwanisa dzipinde uye akaputsa pasi. Zvose zvinoita OK, izvozvo nhunzi zvakanaka.
On rokumusoro ECAM chidzitiro, pane ndandanda zvikanganiso pamwe hydraulics. Vose vane chinhu chokuita hydraulics maitiro C, uye pamusoro rapazasi ECAM, kuti munhu zvechokwadi chinhu.
Ndine B772 rongedza kutorwa kubva pano, ane chete VC, asi pasina kukanganisa.
Saka, chero nzira kugadzira ichi?
2 makore mwedzi 1 apfuura #354 by Gh0stRider203
Moto kwerunyararo vakomana, uye kuwana rikarira itsva?
All Hazviiti parutivi ... Zvinosuruvarisa handina shiri iyi, saka hapana haasi zvakawanda ndinogona kuita.
Wati wakatarisa zvose ukomba netsaona?
Time chokusika peji: 0.195 mumasekonzi